म बाट गल्ती भो भन्दै निशाकाे दिदिले मागिन मा’फी निशाको भाइ भन्दै अस्पतालमा अ’पचिरित मान्छे छिरेको भन्ने कुरा यस्तो पो रहेछ । (भिडियो सहित ) – Sandesh Press
दुई हप्ता माथि नर्भिकमा उपचार भईरहँदा निशाको अवस्था सु’ध्रदै गएको उनको दिदीले बताएकी थिइन् । तर हाल भने आफू लाई अस्पताल मा कसैले सुचना दिएकाे र उक्त सुचना झु’टाे भएको खु’लासा गरिन। उनले अब भने अस्पताल को आधी’कारीक सुचना भए पछी मात्र बोल्ने र आफू ले ग’ल्ती गरेको मा’फी दिन आग्र गरेको छिन।भाइ भनेर भेटन आएको मान्छे गतल हो भनेको छन। अस्पतालमै कलाकार निसालाई भेट्नको लागि धेरै व्यक्तिहरु जाने गर्दछन्।केहि व्यक्तिहरु निसाको लागि सहयोग लागि जाने गर्दछन् भने केहि व्यक्तिहरु भेटघाटको लागि मात्र जाने गर्दछन्। यस्तै हिजोकै दिनमा पनि म निसाको भाई हु भन्दै केहि फलफुल र जुस लागि निसालाई भेट्न अपरिचित व्यक्ति अस्पताल पुगेका थिए ।
उनले निसालाई भेटेपछि निसालाई जुस खुवाएर उक्त व्यक्ति गएपछि निसा लाई गा’र्हो भएर एक्कासी उनलाई भेन्टिलेटरमा रखिएको छ। अस्पतालमा निसाको भाई हु भन्दै पसेका व्यक्तिलाई दिदी उसाले पनि चिनेको छैनन्।उक्त व्यक्ति दिदिको पछि पनि लागेको दिदि उसाले बताएकी छिन्। उनलाई त्यो व्यक्तिबाट ड’र लागेपछि आफ्नो बुबालाई बोलाएकी थिइन्। त्यस दिन निसाको भाई अस्पताल नगएको दिदीको भनाई छ। उक्त व्यक्तिलाई चिन्नको लागि सिसिटिभी भिडियो हेर्नको लागि उक्त परिवारले माग गरेको छ।
घरमा पढ्दै गरेको छोराले पनि दिदीको अवस्था देखेर पढ्न छोडेर कृषि पेशमा लाग्यो। त्यहि बाट आएको कमाइले नै छोरिको उपचार भएको छ। घरमै अ’र्धचे’त अवस्थामा रहेकी उनी बोल्न सक्दिनन् भने अरुले खु’वाइदिनुपर्छ ।कसैले केही कुरा गर्यो भने सुन्न सक्छिन् र आँसु बगाउने गर्छिन् तर जवाफ दिन वा अरुलाई रे’सपोन्स गर्न सक्दिनन् । हातखुट्टा नै कुँ’जिएर ओ’छ्यान परेको ३ वर्ष भैसक्यो ।
उनलाई छोडेर कति जान हुदैन ,एक जना उनको साथ्हिमा बस्नुपर्छ होइन भने उनि रुन्छीन बिहीबार बिहान उनको उ’द्धार गरिएको हो । उनको सहयोगको लागि बुबाले अपिल गरेका छन्। बुबाको नाम प्रेम प्रसाद घिमिरे – 9851238952 र उहाको बैंकको खाता न. 0840613613205001 मा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ।भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
Prevबज्यो खतराको घण्टि ! स्याङ्जा र गोरखा पछि यो ठाउँमा पनि नयां भेरियन्टको पुष्टि,साबधानी अपनाउन आग्रह
बिहान तामाको भाँडाको पानी पूरै घरमा छर्किनुहोस्, हटेर जान्छ नकारात्मक उर्जा, हुन्छ धनको वर्षा